"M na-kwalite m iTunes ka ọhụrụ version. Otú ọ dị, ọ bụ weird na m nwere ike chepụta otú nyefee listi ọkpụkpọ site na m iTunes m iPod. Bụ n'ebe ọ bụla atọ banyere nke a? Biko, nyere."
iTunes bụ otu nke kasị ukwuu ngwaọrụ n'ihi na ọrụ nyefee songs si iTunes ka iPod. Otú ọ dị, o yiri ka ndị ọhụrụ imewe nke iTunes 11 ka ụfọdụ ndị ọrụ isiri ya ike ka mmekọrịta listi ọkpụkpọ iji iPod. Na ụfọdụ ndị ọhụrụ iPod ọrụ amaghị otú nyefee oyiri playlist si iTunes ka iPod kwa. N'ezie, ọ bụ nnọọ mfe iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị. Na-esonụ akụkụ, 2 mfe ụzọ na-ẹkenam gị nyefee a playlist si iTunes ka iPod.
Ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iPod enweghị iTunes
Mmekọrịta listi ọkpụkpọ iji iPod na iTunes
iTunes dị mma na-ebufe listi ọkpụkpọ iji iPod. Otú ọ dị, ọ na-achọ ka ị na-ejikọ gị iPod na naanị otu kọmputa. Ọ pụtara na, na ị na-achọrọ naanị nyefee listi ọkpụkpọ site na kpọmkwem kọmputa gị iPod. Ma, a ịdọ aka ná ntị ga-abịa, na-agwa unu na ọ ga-akwụsị ihe gị iPod. Ihe ihe jọgburu onwe. Ke idaha - Nyefee listi ọkpụkpọ site na a dị iche iche na kọmputa na-iPod, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo idetuo iTunes listi ọkpụkpọ gị iPod. Ọ ga-mgbe mgbe ihichapu gị iPod. Lee ndị nzọụkwụ.
Pịa Download button n'okpuru ibudata Wondershare TunesGo. Mgbe ahụ, wụnye na-agba ya na kọmputa gị. Jikọọ gị iPod na kọmputa gị site na eriri USB nke bụ maka gị iPod. Wondershare TunesGo ga chọpụta gị iPod na-egosipụta ya ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Nyefee listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPod
Na Wondershare TunesGo sidebar, ị pụrụ ịhụ Playlist. Pịa ya ịbanye akara panel maka listi ọkpụkpọ. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ Add button n'elu. Pịa triangle n'okpuru ya ma họrọ Tinye iTunes listi ọkpụkpọ. Lelee listi ọkpụkpọ gị mkpa ma pịa OK.
oge ọ bụla iTunes syncs a playlist gị iPod, ochie playlist ga-ewepụ. Ọ bụ egwu, karịsịa mgbe ị na-chọrọ ịnọgide ochie otu kwa. ma ọ bụrụ na ị chọrọ mbupụ iTunes listi ọkpụkpọ gị iPod na na-na ochie listi ọkpụkpọ, Tunesgo nwere ike idozi nsogbu gị.
Dị ka m na kwuru na iTunes bụ ndabere ngwá ọrụ nke bụ ike inyere gị aka ịkwaga listi ọkpụkpọ site na iTunes Library ka iPod, otú iji iTunes ka mmekọrịta iTunes listi ọkpụkpọ iji iPod nwere ike ịbụ mbụ usoro. Esonụ nzọụkwụ n'okpuru, n'ezie ị ga-nweta ihe mgbaru ọsọ gị hassle kpam kpam.
Nzọụkwụ 1. Launch iTunes
Ẹkedori iTunes-eme ka n'aka na ọ bụ nke ọhụrụ version. Ọ bụrụ na ọ bụghị, i na-kwesŽrŽ imelite ya. Ị nwere ike ibudata iTunes ebe a. Ọ bụrụ na ndị playlist ị chọrọ nyefee si iTunes ka iPod esesịn ikodu ke iTunes, Ikwu Nzọụkwụ 2. Ọ bụrụ na, na-agụ ndị na-esonụ Ama.
Import listi ọkpụkpọ iji iTunes: ma ọ bụrụ na listi ọkpụkpọ mkpa ka ị nyefee gị iPod-adịghị na iTunes Library, ị kwesịrị ị na pịa iTunes File menu, họrọ Library> Bubata Playlist mbubata listi ọkpụkpọ iji iTunes.
Ike ọhụrụ listi ọkpụkpọ: ma ọ bụrụ na ị chọrọ ike ọhụrụ playlist, pịa View menu ma họrọ Gosi sidebar. Pịa + akara ngosi na ala nke sidebar ike a playlist. Wee pịa Music taabụ n'elu sidebar. Ego chọrọ songs na nri click. Họrọ Tinye ka Playlist.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta iTunes listi ọkpụkpọ iji iPod
Jikọọ gị iPod gị na kọmputa site na gị iPod eriri USB. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, ị ga-ahụ na ọ bụ n'okpuru Ngwaọrụ na sidebar. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ sidebar maka iTunes, na-ekpughe ya site na ịpị View> Gosi sidebar.
Pịa gị iPod n'okpuru Ngwaọrụ. N'akụkụ aka nri nke Ohere, ị ga-ahụ na Music taabụ. Pịa ya. Ego mmekọrịta Music> Họrọ listi ọkpụkpọ, nka, albums, na Genres. Họrọ playlist gị mkpa ma pịa Mee.
Otú nyefee Music site na kọmputa na-iPod
Olee otú Detuo Music si iPod ka Computer
Otú nyefee Songs si iPod ka iTunes
Olee otú dezie Ndetuta egwu ọkpụkpọ na iPod
Olee otú Detuo listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes
Olee otú ndabere iPod Music ka Mac
> Resource> iTunes> otú nyefee listi ọkpụkpọ site na iTunes ka iPod